के अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो ? यस्तो छ वास्तविकता - Dainik Online Dainik Online
के अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो ? यस्तो छ वास्तविकता
काठमाडौँ । अन्डरवर्ल्ड डन भनेर चिनिने दाउद इब्राहिमको कोरोनाबाट मृत्यु भएको अड्कलबाजीले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ।
शुक्रबार भारतका केही मिडियाले दाउद र उनकी श्रीमती कोरोना संक्रमित भएको र कराँचीको सैनिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेको जानकारी दिएका थिए। दुबैको स्थिती गम्भीर बताइएको थियो। त्यसपछि शनिबार उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक हुन थाल्यो। तर यसको अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन।
शुक्रबारमात्रै दाउदका भाइ अनिसले दाउद संक्रमित नभएको स्पष्टिकरण दिएका थिए। शुक्रबार राती इन्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई उद्धृत गरिएको रिपोर्टमा कराँचीको क्लिफ्टन इलाकामा बस्ने दाउद र उनकी श्रीमतीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको थियो।
दाउदको स्वास्थ्यबारे चलिरहेको अड्कलका बीच भारतीय सञ्चार माध्यमले अनिससँग कुराकानी गरेका थिए। अनिसले दाउद वा उनका परिवारका कुनै पनि सदस्य संक्रमित भएको खबर खारेज गरिदिएका छन्। अनिस कहाँ छन्, त्यो स्पष्ट छैन।